Ao Armenia taorian’ny ady, ny fahalalahan’ny asa fanaovana gazety no petahan’ireo mpanao lalàna · Global Voices teny Malagasy
Lamandy mavesatra sy famonjàna hoan'ireo tratra manala baraka solontenan'ny governemanta
Voadika ny 30 Jona 2021 20:23 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, عربي, Ελληνικά, English
Armenia – Kianjan'ny Repoblika, Yerevan , sary nopihan'i Dumphasizer. Nampiasàna lisansa CC BY-SA 2.0
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny OC Media amin'ny fiteny anglisy. Dika nokiraina no averina avoaka etoana ao anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Ny 7 Febroary, nitsidika ny faritanin'i Syunik ao Armenia i Victoria Andreasyan, mpanao gazety miasa ho an'ny Infocom mba hanangona tatitra momba ireo tantara manokan'ireo mponina mipetraka manakaiky ny sisantany iraisany amin'i Azerbaijana. Rehefa tonga teo amin'ny fidirana ny tanàna an-tsisintany ao Shrurnukh izy sy ny mpakasary niaraka taminy dia nosakanana teo amin'ny toeram-pisavàna.
“Nolazain'ireo mpitandro filaminana niandry ny sisintany fa mila manana ny fahazoandàlana avy amin'ny National Security Service (NSS) izahay mba ho afaka miditra ao an-tanàna,”hoy izy tamin'ny OC Media. Andro telo taorian'ny dian'i Andreasyan, nolazain'ny NSS fa mila fahazoandàlana ireo mpanao gazety vao afaka miasa any amin'ireo faritry ny sisintany.
Taorian'ny fifampiraharahàna vitsivitsy, navela niditra ny tarik'i Andreasyan, saingy “nosakanana tsy ho afaka miresaka amin'ireo mponina, na maka lahatsary,” hoy izy.
Tsy i Andreasyan ihany no niaina ny tahàka izany. Hatramin'ny nanasoniavan'ny telo tonta ny fifanarahana fandriampahalemana tamin'ny fitsaharan'ny Ady Faharoa tao Nagorno-Karabakh, tamin'ny 9 Novambra 2020, hozongozonin'ireo fepetra vaovao sy lalàna mazàna manjavozavo ny asa fanaovana gazety.
Ny taona 2021,natolotra ho an'ny parlemanta armeniàna ny tolodalàna roa samihafa momba ny fanehoankevitra sy ny asa fanaovana gazety. Voalazan'ilay tolodalàna voalohany ny fampitomboana avo dimy heny ny lamandy aloa noho ny “faniratsirana sy fanalàna baràka” — ֏5 million (9,500 USD) sy ֏10 million (19,000 USD) — ary efa nandalo ny fandinihana azy voalohany tao amin'ny antenimiera mpanao lalàna. Sosokevitr'ilay tolodalàna faharoa ny hanasaziana ara-bola hatramin'ny ֏500,000 (1,000 USD) ireo mpamoaka vaovao izay mitanisa ho loharanom-baovaony ireo tranonkala na kaonty media sôsialy tsy fantatry ny rehetra izay tompony.
Ilay tolodalàna farany dia fantatra be ho toy ny valinkafatra ho an'ny laza tsy mitsahatra mitombo azon'ireo fantsona tsy mitonona anarana ao amin'ny Telegram, nandritra sy taorian'ny ady, ny sasany amin'ireny dia manana firehana mpomba ny mpanohitra ary indraindray mandefa fandisoam-baovao hanoherana ny governemanta izay avy eo raisin'ireo media mpamoaka vaovaon'ny mpanohitra indray.
Ny tolodalàna fahatelo, izay ny biraon'ny fampanoavana ao Armenia no nanao azy saingy tsy mbola voatolotra ho an'ny pralemanta, dia manao ho tsy ara-dalàna ny “faniratsiràna sy ny fifosàna olona manao asam-panjakana mbola eo amperin'asa manatanteraka ny andraikiny ofisialy.” Ireo voaheloka amin'izany dia mety hiatrika lamandy hatramin'ny ֏3,000,000 (6,300 USD) na famonjàna hatramin'ny roa taona.
Betsaka ireo fikambanana mpanaramaso ny media armeniàna, isan'izany ny Media Initiatives Centre, no namoaka fanambaràna niraisana niampanga ilay tolodalàna ho “fitohizana lojikan'ireo hetsika fanaovana lalàna nampidirin'ireo manampahefana tato anatin'ny volana vitsivitsy” izay “miketrika fameperana tsy azo ekena hatao amin'ny fahalalahana maneho hevitra.”
“Tsy ho vita ny hanao maso be tsy mahita ny zavamisy hoe raisin'ireo tomponandraikitra sy pôlitisàna samihafa ho toy ny ompa, fifosàna ireo kiana fanatsaràn-javatra ataon'ny mpampahalàla vaovao, ary dia manandrana mamaly faty eny anatrehan'ny fitsaràna ry zareo,” hoy ny vakin'ilay fanambaràna.
Shushan Doydoyan, filohan'ny Freedom of Information Center sady profesora mpampianatra ny asa fanaovana gazety ao amin'ny oniversitem-panjakana ao Yerevan, nilaza tamin'ny OC Media fa mino izy hoe fandroràna mitsilany ireny lalàna ireny raha sanatria ka lany eo.
“Misy ny fangatahan'ny fiarahamonina hahazo vaovao, ary hahita fomba foana izy hahatanteraka izay fangatahany izay,” hoy izy. “Raha raràna ireo mpanao gazety tsy ho afaka manangana tantara misy kalitao, dia ny fosafosa sy ny fakom-baovao no hanentsina ny banga.”
Gegham Vardanyan, lehiben'ny famoahan-dahatsoratra ao amin'ny Media Initiatives Centre, ONG fampianarana media, nilaza tamin'ny OC Media fa mety vao mainka fotsiny hametraka tontolo feno fankahalàna media ireo lalàna ireo. “Taona vitsy lasa izay, na ny Fitsaran'ny Lalam-panorenana aza dia nandrisika ny tribonaly hisoroka ny fampiharana ireo lamandy faratampony satria mety horaisin'ny olona ho toy ny tsindry atao amin'ny media izany,” hoy izy nanampy.
niaraka tamin'ny fampidirana ny lalàna miaramila tamin'ny 27 Septambra, andro voalohan'ny ady nifanaovan'i Armenia sy Azerbaijana no nanomboka ny fiovàna tampoka ao anatin'ny tontolon'ny media ao Armenia. Teo ambanin'ny lalàna miaramila, noraràna ireo mpanao gazety tsy hanakiana ireo hetsika ataon'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta na ny zavabitan'ny tafika armeniàna.
Araka ny voalazan'ny mpitandro filaminana armeniàna, media mpilaza vaovao niiisa 13 ary olontsotra niisa 62 no nampandoavina sazy ara-bola talohan'ny nanesorana tamin'ny 2 Desambra an'ireo fepetra. Raha napetraka ireo fepetra, nisy teo amin'ny 6.000 ireo vahiny mpanao gazety nahazo fahazoandàlana avy amin'ireo manampahefana armeniàna sy ireo manampahefana ao Nagorno-Karabakh hahazo manangom-baovao ao Nagorno-Karabakh. Fahazoandalana an'ny mpanao gazety tokana monja no natsahatra — ny an'i Ilya Azar, izay namoaka tatitra tena nanakiana tamin'ny fomba henjana ny tafika ao Armenia tao anatin'ny Novaya Gazeta, mpamoaka vaovao tsy miankina rosiàna.
Taorian'ny ady, nanakiana mafy an'ireny fepetra napetraka ho an'ireo mpanao gazety mandritra ny fotoanan'ny ady ireny i Karen Harutyunyan, lehiben'ny famoahan-dahatsoratry ny CivilNet, izay niafara tamin'ny fanaovana tatitra “tsy nanao afa-tsy ny vao mainka nanaratsy bebe kokoa ny fahatakaran'ny vahoaka ny tena zavamisy.”
“Ny fizotr'ilay ady nandritra ny 44 andro dia nampiseho fa ny asa tsy misy teritery ataon'ireo mpanao gazety dia nanavotra ilay firenena tsy ho any amin'ny faharavàna sy loza mahatsiravina henjana kokoa,” hoy ny nosoratany.
Taorian'ny nitsaharan'ny ady, ny minisitry ny fiarovana ao amin'ny firenena dia toy ny nihazona ny fifandraisana marisarisa misy aminy sy ny media — indrindra fa tamin'ny fahanginany. Marobe ireo fikambanana media mitatitra fa nolavina ny fahalalahan-dry zareo hikaroka vaovao any amin'ny ministeran'ny fiarovana, naroso ho antony ny hoe “tsiambaratelom-panjakana”, na dia ny zavatra tsotra toy ny isan'ireo miaramila armeniàna maty, naratra, ary tsy hita popoka aza.
Nolazain'i Shushan Doydoyan fa, rehefa dinihana, atahorany ny vao mainka hiharatsian'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao aty aorian'ilay ady ary ny sivana tsy am-piheverana ataon'ny governemanta dia loza mitatao ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, izay “efa ady sy tolona nandritra ny taona maro vao azon'i Armenia izany”.